raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy. Amin’izay hoy izy dia mbola hilaharana be sy hitangoronana ihany ilay fanampiana Vatsy Tsinjo sy Tosika Fameno izay nomarihiny manokana fa antony iray tena mampahazo vahana ny tsimok’aretina coronavirus any an-toerana. Sefom-pokontany iray mpitsinjara izany no nomarihiny omaly fa tratry ny COVID 19 vokatr’izay fifampikasohana diso tafahoatra izay. Miantso ny fanjakana mba hanafoana ity famoriana olona amin’ny alalan’ny fizarana fanomezana ity araka izany ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka. Hatsaharo hoy izy ny fihibohana ary avelao ny olona hiasa saingy manaja ilay fepetra ara-pahasalamana kosa toy ny fanaovana aron-tava, ilay elanelana 1 metatra… Ho an’ireo faritra tena ahitana ilay tsimok’aretina kosa dia nanolo-kevitra ny fanjakana izy mba hampiharana ilay fihibohana mitokana. Ny miaramila no hampiasaina hoy izy hanara-maso ny fivoahan’ireo olona mivoaka sy miditra ao amin’ ilay toerana ary raisina avokoa ny anarany. Hatao fitiliana avokoa ny olona ao amin’ilay toerana hoy hatrany izy, omena aron-tava ary tsy avela raha tsy voafehy ilay aretina. Nomarihiny moa fa mitovy amin’ny olona any Senegal ny mponina eto Madagasikara tsy mahatanty fihibohana tambabe lava loatra fa tsy maintsy mitady ny sakafo hohaniny.